Sacuudiga Oo Shaaca Ka Qaaday Inuu Lacago Oogu Deeqayo Soomaaliya | Mareergur.com	Sunday, May 19th, 2013	Home
Sacuudiga Oo Shaaca Ka Qaaday Inuu Lacago Oogu Deeqayo Soomaaliya
Oct 25, 2012 - Comments off	War kasoo baxay aqalka boqortooyada saudi arabia ayaa lagub sheegay in boqorka wadankasi cabdulaahi bin abdi aziiz uu soo saray amar ku aadan mashruuc loogu gurmanayo shacabka somalia iyo kuwa reer falastiin midasi oo lagu soo beegay munaasabada iida carafo.
La taliyaha wasiirka arimaha gudaha wadanka saudi arabia dhanka gar gaarka bini aadanimo diktoort said al-carabi aya shaca ka qaaday in mashrucani uu yahay mid qeyb ka ah dadaalada isdaba jooga ah ay dawlada boqortoyada u fidinayso shacabka somalia,mashuracasi ayaa masuulkasi waxa uu tilmaamay in mashrucaasi uu ku kacayo lacag gaaraysa 8,568,750 oo lacagta wadanaksi laga isticmalo ee riyaalka.
Masuulka sidoo kale waxa uu muujiyay in munaasabada iida carafo oo ah mid kuweyn umada islaamka ayuu tilmaamay in ay tahay lacagtasi mid loogu gurmanayo kumanan qosaska shacabka somalia gaar ahaan qosaska tabalaysan ee ku nool somalia.
Mashuraca lacagtasi ay ugu talasgashay dawlada saudi arabaia ayaa waxa ay gaarsiin doontaa 350-kun qoys oo somalia iyo kuwo reer falastiin ah waxana loo marsinayaa tagaredasi hay,ada iskashiga islaamiga iyo tiro hay,adaha gobolka, somalia waxa lo qorsheeyay in lagu tagero lacago garaya 1068750 o riyaalka wadankasi.
Somalia waxa ay kamid tahay wadamada dhaca qaarada afrika waxana ay qeyb ay ka aheyd wadamadii ay ku dhufteen abartii sanadii tagtay oo dad badan ay ku geeriyoden kuwo kalan ay ku barakacen.